Turkish Airlines oo 60 tan oo cunto gargaar ah gaadhsiisay caasimadda Somalia ee Muqdisho - Horn Future
Turkish Airlines oo 60 tan oo cunto gargaar ah gaadhsiisay caasimadda Somalia ee Muqdisho
Mogadisho-Diyaarad kuwa xamuulka qaada ah oo ay leedahay shirkadda Turkish Airlines oo ay saarnaayeen 60 tan oo cunto gargaar ah ayaa timid caasimadda Somalia ee Muqdisho sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Anadolu.
Gargaarkan cunto ee dheeraadka ah ayaa loogu talagalay carruurta Soomaaliyeed ee ku nool dalkan abaartu saameeysay iyada oo kala badh dadku ay la kulmayaan dhibaatooyin bini’aadamnimo,sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Cabdikarin Asair oo ah agaasimaha guddiga qaxootiga Maraykanka ee Somalia ayaa u sheegay wariyayaasha in gargaar gaadhsiin doonaan 12 goobood oo kamid ah Somalia ka mid ah maalmaha soo socda.
Tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2011 shirkadda Turkish Airlines ayaa ah shirkadda diyaaradeed ee kaliya ee caalamiga ee u adeegta Somalia sida ay sheegtay wakaaladdan.
« Rohingya group says Myanmar engaged in ‘genocide’	» Der Spiegel:Waxa sabab u ah inay kacdo ( Air Berlin) sheekhyada imaarada Abu Dhabi